Hurumende Yotatarika Kugadzirisa Nyaya dzeHupfumi
Gurukota rezvegwara rehupfumi, VaTapiwa Mashakada, neChitatu vakazivisa komiti yeparamende inoona nezvebhajeti kuti Zimbabwe yakakundikana kuzadzikisa hurongwa hwayo hwekuedza kuumbiridza hupfumi hwenyika.
Chirongwa ichi chakaparurwa gore rapera muna Chikumi. VaMashakada vanoti hurumende yakatadza kuwana rubatsiro rwemari kubva kunze kwenyika, kusawirirana panyaya yegwara rekutora muhurumende, uye kunonoka kutambira mapepa evanhu vainge vachida kutanga mabhizimisi munyika. Vanotiwo nyaya yekusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekurima iri kuvhiringidzawo hurongwa hwehurumende.
Kuti chirongwa ichi chibudirire paida mari inosvika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti izvi zvinoreva kuti nyika iri kutadza kuwanira vanhu mabasa izvo zvava kupa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, uye vachisanda nesangano reLabour and Economic Development Reasearch Institute of Zimbabwe, VaProsper Chitambara, vanoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanofanirwa kupindira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyaya dzehupfumi munyika.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoonz nezvebhajeti, VaPaddy Zhanda ve Zanu PF, vanoti hurumende yemubatanidzwa yakundikana kugadzirisa nyaya yehupfumi.
Hurukuro naVaPaddy Zhanda naVaProsper Chitambara